अझै ‘माधवजी’ « Khabar24Nepal
माघ ९, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिनअघि भनेका थिए, ‘माधव नेपालजीबारे मलाई टिप्पणी गर्नु छैन। किनभने, उहाँ प्रचण्डको कार्यकर्ता हो। कार्यकर्ता हुन जानुभएको छ।’
नेकपा विभाजनपछि बनेको दाहाल–नेपाल खेमाका नेपाल पनि अध्यक्ष हुन्। उक्त खेमाले दुवै अध्यक्ष समान भन्दै आएको छ। बैठकमा आलोपालो अध्यक्षताको प्रणाली बसाएर देखाएको पनि छ। तर, व्यवहारतः त्यो समानता छ त ? कि प्रधानमन्त्रीले भनेझैं नेता–कार्यकर्ताको हालत छ ? बुधबार बिहान सम्पादकहरूसँगको अन्तरक्रियामा गरिएको आपसको सम्बोधनले भने उँच–निचको अवस्थै देखाएको छ।
अन्तरक्रियामा सम्पादकहरूका सुझावपछि पहिला नेता नेपाल बोले। नेपालले दुई ठाउँ दाहालको नाम लिए, जहाँ अध्यक्ष प्रचण्ड र कमरेड प्रचण्ड भने। अन्त्यमा बोलेका दाहालले भने नेपालको नाम कम्तीमा ७ ठाउँ लिए, सबैपटक ‘माधवजी’ भने। समानता दर्शाउन कम्युनिस्ट पार्टीमा सबैलाई कमरेड भन्ने चलन हुन्छ। कनिष्ठलाई समेत हतपती ‘जी’ लगाइँदैन।
फुट्नुअघि नेकपामा ओली–दाहाल लामै द्वन्द्व चल्यो। ओलीले आफूलाई ‘नाम मात्रको अध्यक्ष बनाएको, अध्यक्ष हुन नदिएको’ दाहालको गुनासो झगडाको एउटा कारण थियो। उही दर्जाको अध्यक्ष भए पनि सम्मान र स्वाभिमानमा ठेस पुर्‍याएको उनको ठम्याइ थियो। त्यसलाई ‘जायज’ ठहर्‍याउँदै क्रमशः साथ दिएका थिए वरिष्ठ नेता नेपाल, झलनाथ खनाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले।
त्यही विवाद ओलीलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट हटाउने अभियानसम्म पुग्यो। दाउ छोपाछोपकै बीच ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। त्यसले नेकपा दुई चिरा भयो। नेपाल ७ गते ‘बहुमत केन्द्रीय सदस्य’ बाट अध्यक्ष बनाइए। ८ गते दाहाल विघटित सांसदको बहुमतबाट संसदीय दलको नेता चुनिए।
दाहालले भन्दै आएका छन्, ‘ओलीले मलाई जुन सम्मान दिनुभएन, हामी दुईबीच त्यो हुँदैन।’ एकताका क्षणमा ६० प्रतिशत अंश रहेको पूर्वएमालेबाट प्रतिनिधित्व गरेका ‘अध्यक्ष’ ओली थिए। उनको विकल्पमा अध्यक्ष भनिएका नेपाल भने अझै ‘जी’ मा सीमित छन्।
अछाममा फौजी किराले मकै बाली नष्ट,किसान चिन्तित
कोरोना भाइरस : मृत्यु हुनेको संख्या २४ हजार ६५ (सूचिसहित)
१४ वर्षीया छोरी बलात्कार गर्ने बुबा पक्राउ